Maxaa kajira in uu baaqday shirka RW Rooble & Midowga Musharixiinta? - Awdinle Online
Home News Maxaa kajira in uu baaqday shirka RW Rooble & Midowga Musharixiinta?
Magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu wadaa in Caawa ay kulan ku yeesheen Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble & Midowga Musharixiinta Madaxweynaha.
Kulanka oo noqon doona midkii saddexaad oo ay yeeshaan ayaa saacadihii la soo dhaafay warar soo baxayay waxaa ay sheegayeen in uu baaqday, hayeeshee Xukuumadda Soomaaliya iyo dhinaca Musharixiinta labada ay sheegeen in uu qabsoomayo shirka.
Afhayeenka Xukumadda Xilgaarsiinta Maxamed Ibraahim Macalimuu ayaa qoral uu soo dhigay bartiisa twitter-ka ku sheegay in galinka dambe ee maanta hotel-ka Decale ee Muqdisho uu ka furmayo shir u dhexeeya Musharixiinta iyo Ra’iisul Wasaare Rooble.
Dhinaca kale s lamid ah Xildhibaan Mahad salad oo ka tirsan Golaha Shacabka & Xisbiga uu hoggaamiyo Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xaqiijiyay in shirkaasi uu qabsoomayo Caaawa kadib salaada Maqrib.
Kulanka Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda xilgaarsiinta & Midowga Musharxiiinta ayaa waxaa looga hadli doonaa waxyaabihii ka hirgalay heshiiskii ay dhawaan gaareen sigaar ah waxyaabaha kasoo kordhay baaritaanka dhacdadii 19-kii Bishii Febaraayo.
Kulanka Maanta u qabsoomaya Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda xilgaarsiinta & Midowga Musharxiiinta ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli uu fashilmay shirkii Saddexaad ee Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ugu yeeray Madaxda Dowlad Goboleedyada.
Previous articleDowladda Soomaaliya oo joojisay qaadista Dacwadaha (War-Saxaafadeed)
Next articleSomaliland oo War kasoo saartay doorashooyinka & arrimaha…..